၀ င်ငွေ Aristocrats - သမိုင်းကြောင်းအရမတည်ငြိမ်မှုနည်းသော ၀ င်ငွေမြင့်မားခြင်း - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်သတင်း
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick အောက်တိုဘာလ 2, 2019 မေလ 19, 2020 ဝင်ငွေ Aristocrats ဘ‌‌လော့ခ်, ငွေချေးစာချုပ်များ, စီးပွားရေး, Corporate Bonds, မြတ်များမင်းမျိုးအနွယ်ဝင်, အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ, S&P 500 ၏ခွေးများ - ၂၀၂၀, အယ်ဒီတာရဲ့ Pick, Fixed ဝင်ငွေခွန်, ဝင်ငွေ Aristocrats, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ
၀ င်ငွေ Aristocrats အစုစုကိုစိတ်တည်ငြိမ်မှုဖြင့်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။
ဝင်ငွေနှင့်တိုးတက်မှု၏မြင့်မားသောအဆင့်ဆင့်ထုတ်လုပ်ရန်ဒီဇိုင်း, အ ဝင်ငွေ Aristocrats Durig ၏ဘက်စုံအစုရှယ်ယာအများဆုံးနည်းဗျူဟာအဖြစ်ပုံဖော်နေကြသည်။
တစ်သက်တာပြန်လာခြင်း 8.49% *
ပျမ်းမျှလက်ရှိအထွက်နှုန်းအထက် 5.25% *
* အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဆောင်ရွက်ချက် (၉-၂၆-၁၉) အဖြစ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပေါင်းစည်းထားသောစွမ်းဆောင်ရည် (၃) ခု၏ပေါင်းစပ်စွမ်းဆောင်ရည်
ဒီနေ့ကမ္ဘာမှာမရေရာမှုတွေများလွန်းနေတဲ့အချိန်မှာငါတို့ဘယ်တော့မှမသေချာတဲ့အရာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ငွေ၊ ဝင်ငွေ Aristocrats အဖြေတစ်ခုရှာတွေ့ပြီ
စိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ဒီဇိုင်းလုပ်ထားသော Durig's Income Aristocrats သည်ပြိုင်ဘက်ကင်းသောအဆင့်ကိုရရှိရန်အတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစား ၂ ခု၊ သက်သေပြထားသောနည်းဗျူဟာ ၃ ခုနှင့်ကုမ္ပဏီများစွာမှ ၀ င်ငွေများကိုရယူသည်။ ဝင်ငွေအမျိုးမျိုး.
အစုရှယ်ယာအစုရှယ်ယာများနှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းငွေချေးစာချုပ်များမှထုတ်လုပ်သောကူပွန်အကျိုးစီးပွားနှင့်အပြာရောင်ချစ်ပ်ခွဲဝေမှုတို့သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုခွင့်ပြုသည် သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေစီးအမျိုးမျိုးမင်းမျိုးအနွယ်ဝင်အပြာချစ်ပ်တဖြည်းဖြည်းခွဲဝေနေစဉ် အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဝင်ငွေတိုးပွားလာ၀ င်ငွေတိုးပွားရေးအတွက်ကူညီခြင်း
Durig ၏ဘက်ပေါင်းစုံကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်မှု၏ရလဒ်မှာမတူကွဲပြား။ တည်ငြိမ်သော ၀ င်ငွေစီးဆင်းမှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှသိသာသောတိုးတက်မှုအတွက်ကြီးမားသောအလားအလာရှိသည်။
ကြီးထွားမှုသည်နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုဖြစ်သည် ဝင်ငွေ Aristocratsအတူ ဒါကြောင့်ကနေတည်ဆောက်သည်မဟာဗျူဟာသုံးခုစလုံး အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသိသိသာသာကြီးထွားထုတ်လုပ်ရန်အလားအလာရှိခြင်း။
အစုစုအတွင်းရှိအပြာရောင်ချစ်ပ်စတော့ရှယ်ယာများသည်အဓိကတိုးတက်မှု၏အဓိကမောင်းနှင်အားများဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှစျေးနှုန်းတက်လာခြင်းနှင့်အစုရှယ်ယာများတွင်ပါ ၀ င်သည့်ကော်ပိုရေးရှင်းခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်အဓိကအားဖြင့်ကူပွန်အကျိုးစီးပွားမှတစ်ဆင့် ၀ င်ငွေရရန်ဖြစ်သည်။
A multi ပိုင်ဆိုင်မှုမဟာဗျူဟာ ထိုကဲ့သို့သော Durig ရဲ့အဖြစ် ဝင်ငွေ Aristocrats ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်သောပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားများနှင့်ကဏ္sectorsများကိုထိတွေ့စေသည်။ The သုံးကွဲပြားခြားနားသောမဟာဗျူဟာများရောစပ် Durig ၏ ၀ င်ငွေ Aristocrats Portfolio တွင်ပါ ၀ င်သည့်ကွဲပြားခြားနားသောပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားနှစ်မျိုးဖြစ်သောကော်ပိုရိတ်ငွေချေးစာချုပ်များနှင့်အပြာရောင်ချစ်ပ်ရှယ်ယာများ။
ငွေချေးစာချုပ်နှင့်စတော့ရှယ်ယာပုံမှန်အားဖြင့်ဖြစ်ကြသည် ဆက်စပ်မှုမရှိသောပိုင်ဆိုင်မှုများ, Durig ရဲ့အတွက်တစ် ဦး ချင်းစီကတခြား offsetting ဝင်ငွေ Aristocrats အတော်လေးကြားနေအစုစုကိုဖန်တီးရန်အစုစု။
Durig's Income Aristocrats ကဲ့သို့သောပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာများသည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုနှင့်ဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်မှုသာမကပိုင်ဆိုင်မှုမဟာဗျူဟာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအမျိုးမျိုးသောစွန့်စားမှုအမျိုးမျိုးကိုပေးသည်။
A မကြာသေးမီကဆောင်းပါး Forbes မဂ္ဂဇင်း ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိစီးပွားရေးအခင်းအကျင်းတွင်ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာ၏ထိရောက်မှုကိုဆန်းစစ်ခဲ့သည်
“ အမေရိကန် - တရုတ်ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲကိုမရပ်တန့်နိုင်ပါဘူး။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအရဒီနေ့ဆိုလျှင်ရှယ်ယာများနှင့်ပုံသေ ၀ င်ငွေအများဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့် ၂ ခုမှာမတည်ငြိမ်မှုတိုးလာတာကိုဆိုလိုတယ်။ ကျယ်ပြန့်သောပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ကဏ္sectorsများကိုထိတွေ့ခွင့်ပြုသည်။
ထို့အပြင် Income Aristocrats များသည် Durig ၏သမိုင်းကြောင်းသုံးခုကိုအတူတကွပေါင်းစပ်ထားသည် အအောင်မြင်ဆုံးအစုစုကိုမဟာဗျူဟာ ၎င်းသည်အဘယ်အရာကိုဖန်တီးရန်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သည် ဖွယ်ရှိသည်၎င်း၏အများဆုံးပိုမိုစုံလင်အစုစုကိုသေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုအချို့နှင့်ပိုမိုထိတွေ့မှုရှိစေသည် အမြင့်ဆုံးအလျှော့ပေးလိုက်လျော အမျိုးမျိုးသောပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားများ, စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ဖလှယ်မှုများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ။
မျိုးစုံပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ၀ င်ငွေစီးဆင်းမှုနှင့်အစုစုအစုအဖွဲ့နှစ်ခုလုံးသည်အလွန်အမင်းကွဲပြားခြားနားလာသည်။
ဤပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ၀ င်ငွေနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အဆင့်အမျိုးမျိုးကွဲပြားခြင်းသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားရှယ်ယာနှင့်ပုံသေ ၀ င်ငွေ၏လမ်းကြောင်းသစ်များတွင်ပါ ၀ င်ခွင့်ပြုသည်။ သမိုင်းမတည်ငြိမ်မှုကိုလျှော့ချ.
Durig ရဲ့ ဝင်ငွေ Aristocrats အစုစု ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှမြင့်မားသော (နှင့်ကြီးထွားလာသော) ၀ င်ငွေအဆင့်များကိုထုတ်လုပ်သည် များစွာသောစက်မှုလုပ်ငန်းများ, ကုမ္ပဏီများနှင့်ဖလှယ်မှုကိုဖြတ်ပြီးကျယ်ပြန့်ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားများမှ။ အဆိုပါအစုစုအတွက် Non- ဆက်စပ်မှုပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကူညီပေးသည် အမျိုးမျိုးတစ် ဦး မတူနိုင်တဲ့အဆင့်နှင့်သိသိသာသာအကူအညီ အစုစုကိုမတည်ငြိမ်မှုကိုလျှော့ချရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား၎င်းတို့၏ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးချဲ့ရန်နှင့်သတ်မှတ်ထားသော ၀ င်ငွေနှင့်ရှယ်ယာလမ်းကြောင်းများတွင်ပါ ၀ င်ရန်၊ ဆိုးကျိုးများ.
အချိန်ကြာမြင့်စွာတိုးတက်မှုနှင့်အတူဝင်ငွေတည်ငြိမ်မှုကိုထုတ်လုပ်ရန်ဒီဇိုင်းတစ်ခုအလွန်အမင်းကွဲပြားခြားနား, multi ပိုင်ဆိုင်မှု, မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်အစုစုကိုရှာကြံရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအဘို့, Durig က၎င်း၏ဝင်ငွေ Aristocrats Portfolio အားလုံးအလွန်နိမ့်ကုန်ကျစရိတ်မှာပရော်ဖက်ရှင်နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဆက်ကပ်အပ်နှံထောက်ခံမှုနှင့်အတူအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်တယ်ယုံကြည်သည်။
ပိုမိုလေ့လာလိုပါကကျွန်ုပ်တို့အား (971) 732-5119 သို့ခေါ်ဆိုပါသို့မဟုတ်အီးမေးလ်ပို့ပါ info@durig.com.
Durig တွင်အထွက်နှုန်းမြောက်များစွာရှိသည်။ ပိုမိုလေ့လာရန်အောက်ကိုနှိပ်ပါ။
ခွငဖြေ - အတိတ်ကစွမ်းဆောင်ရည်ကအနာဂတ်အောင်မြင်မှုရဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ပါ။ မည်သည့်စျေးကွက်ဒေတာသို့မဟုတ်စွမ်းဆောင်ရည်ပြဤထုတ်ဝေ 9-26-19 ၏အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ * အသုံးပြုခဲ့သည့်အခြေခံစံနှုန်းမှာ S&P 500 TR Idx ဖြစ်သည်။ ဒီသုံးသပ်ချက်တွင် Durig Capital မှတင်ပြသောအထွက်နှုန်းမြင့်မားသောနည်းဗျူဟာများသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားလုံးအတွက်မသင့်တော်ပါ။ ၎င်းသည် Durig Capital မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များမဟုတ်သကဲ့သို့လုံခြုံရေး ၀ ယ်ရန်နှင့်ရောင်းချရန်အတွက်တိကျသောထောက်ခံချက်လည်းမဟုတ်ပါ။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်သင့်တော်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်မချမီမှတ်ပုံတင်ထားသောပညာရှင်တစ် ဦး ထံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များကိုတောင်းခံသင့်သည်။
2019 abbv adm ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း များသည်မင်းမျိုးအနွယ်ဝင် မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်အပြာချစ်ပ် များသည်မင်းမျိုးအနွယ်ဝင် သြဂုတ်လ ben အပြာရောင်ချစ်ပ်ရှယ်ယာ အပြာရောင် Chip စတော့ရှယ်ယာ အပြာရောင်ချစ်ပ် ငွေချေးစာချုပ်များ cah ရှဗရွန် အများပိုင်သတင်း cvx အမျိုးမျိုး အမျိုးမျိုးသောအစုစု ခွဲဝေ မြတ်များမင်းမျိုးအနွယ်ဝင် ခွဲဝေကြီးထွားမှု ပိုင်းခြေဝင်ငွေခွန် မြတ်များထိတ် ခွဲဝေမှုအထွက်နှုန်း ခွဲဝေအထွက်နှုန်း Dividends đi DJIA ခွေး အဆိုပါ DOW ၏ခွေးများ S & P 500 ၏ခွေးများ dow Dow Jones Dow Jones စက်မှုပျမ်းမျှ ရေ Durig Capital ကို ed emr ရှယ်ယာ Fixed ဝင်ငွေခွန် Fixed ဝင်ငွေ2FX2 GPC တိုးတက်မှုနှုန်း မြင့်မားသောမြတ်များအထွက်နှုန်း မြင့်မားသော Dividend အထွက်နှုန်း မြင့်မြတ်သော မြင့်မားသည် မြင့်မားသောအထွက်နှုန်း Bonds မြင့်မားသောအထွက်နှုန်း မြင့်မားအထွက်နှုန်းထိတ် ဝငျငှေ ဝင်ငွေ aristocrats ဝင်ငွေအမျိုးမျိုး ဝင်ငွေတိုး ဝင်ငွေနည်းဗျူဟာ ဝင်ငွေစီး တိုးမြှင့်လာသည် တိုးမြှင့်ခွဲဝေ စိတ်ဝင်စားမှု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသုတေသန ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဟာဗျူဟာ kmb ko ခြေထောက် တစ်သက်တာ မိုက်ကယ် B Higgins MMM ပိုင်ဆိုင်မှုမျိုးစုံ Multi- ပိုင်ဆိုင်မှုမဟာဗျူဟာ Nasdaq မြောက်အမေရိက မြောက်အမေရိက Bonds အဝတ်မပါသော NYSE Pep ပက်စီ performance အစုစု အစုစုကိုမဟာဗျူဟာ ကြောငျးအုပျကွီး ပြန်လာ ပြန်လည်သုံးသပ် S&P S&P 500 စက်တင်ဘာ ရင့်ကျက်မှုတို SP500 တည်ငြိမ်ခြင်း စတော့ရှယ်ယာ စတော့အိတ်ချိန်း စတော့ဈေးကွက် စတော့ရှယ်ယာ t tgt လှ us အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု wba xom
ဝင်ငွေ Aristocrats The Income Aristocrats - အဓိက ၀ င်ငွေ Durib Capital ၏အမျိုးမျိုးသော ၀ င်ငွေနှင့်တိုးတက်မှုသည်၎င်း၏နောက်ဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖြေဖြစ်သော Income Aristocrats ကိုမိတ်ဆက်ပေးသည့်အတွက်ဂုဏ်ယူသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုအဓိက ၀ င်ငွေမှအဓိက ၀ င်ငွေနှင့်အမျိုးမျိုးသော ၀ င်ငွေစီးဆင်းမှု၊ S&P 500 မှအပြာရောင်ချစ်ပ်ရှယ်ယာများနှင့်အပြာရောင်ချစ်ပ်ခွဲဝေသူများ၏ကြီးထွားမှုများကိုပံ့ပိုးပေးရန်ဤနည်းဗျူဟာသည်ဈေးကွက်ရှယ်ယာအမျိုးမျိုးမှရှယ်ယာများနှင့်နှောင်ကြိုးဈေးကွက်များတွင်ပါ ၀ င်သည်။ အလားအလာရှိသော Durig မှယနေ့တိုင်အောင်ဖန်တီးခဲ့သည့်အမျိုးမျိုးသောအစုရှယ်ယာမဟာဗျူဟာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည့် Income Aristocrats သည်ထုတ်ပေးသူများ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားများနှင့်စျေးကွက်လဲလှယ်ရေးတို့တွင်ကွဲပြားသည်။
သင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုကြည့်ကောင်းမြင်နိုင်မည့်သင်၏ Gap နှစ်တွင်လုပ်ဆောင်ရန် 7
Cloud Accountant ၏ဖြေရှင်းနည်းများသည်သင်၏ကုမ္ပဏီအားမည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်နည်း